ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးမှ မီးစိမ်းပေးပြီ!!! – Myanmar Live
February 26, 2019 February 26, 2019 - by PCHB
အလုပ်သမားဝန်ကြီးမှ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများဖြစ်ကြသည့် မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊
လာမည့်4ပိုင်းနှစ်သစ်ခါတော်ဖြစ်သည့် အတာသင်္ကြန်အတွင်း သက်ကြီးမိဘများအား ပြန်လည်
ဦးတိုက်လိုသည့်၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကို Re- Entry (အိမ်ပြန်တုံး) ထုစရာမလိုဘဲ ဧပြီလ ၅-၃၀
ရက်ဝန်းကျင်အတွင်းမွေးရပ်မြေသို့ချောမွေ့စွာပြန်နိုင်ရန် ထိုင်း လ၀က မှသက်ညှာဖြေလျော့ပေးလိုက်
ပြီးသည်နောက် ထိုင်းအစိုးရ၀န်ထမ်းများ ကိုလည်း အိမ်ပြန်သည့်အလုပ်သမားများကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး
တင်းကြပ်မှုများမလုပ်ပါရန် သတိပေးထား သည်ဟုလည်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက သကြန်အတွင်းအိမ်ပြန်ခွင့်ဗီဇာ ဖရီး ထုပေးခဲ့သည့်အပေါ် ရွှေမြန်မာများအနေနှင့် နည်းစနစ်မှန်မှန် အသုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောင်လာခဲ့သည့်အခါ သက်မှတ်ရက် ၂၅ ရက်အထက်ကျော်လွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒဏ်ငွေဆောင်ခဲ့ကြရသည့် ရွှေမြန်မာများ များစွာရှိခဲ့ပါသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက ဒဏ်ငွေဆောင်ခဲ့ရတဲ့ပေါ် ပြန်လည်ရှင်းပြပါမည်”
Re-Entry – ဆိုသည်မှာ ပုံမှန်အိပ်ပြန်လျင်ထုနေကြရသည့်တုံးဖြစ်သည် (ပိုက်ဆံပေးရသည် – မိမိ ဗီဇာမကုန်မခြင်းမွေးရပ်မြေတွင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်၅-၃၀ ရက်နေ့အတွင်း ခေတ္တအိမ်ပြန်ခွင့်ဖရီးတုံး ကတော့ နယ်စပ်ဂိတ်တွင်ထုရသည့်တုံးဖြစ်ပြီး (ပိုက်ဆံမကုန်ပါ သတ်မှတ်ရက် ၅-၃၀ ရက်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရမည်)
ခေတ္တအိမ်ပြန်ခွင့်ဖရီးတုံး ကတော့ ထိုင်းအစိုးရမှ နှစ်သစ်ကူးကာလများတွင် ဖွင့်ပေးလေ့ရှိ်သော တုံးဖြစ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အတာသင်္ကြန် အတွင်း ဧပြီ ၅-၃၀ ရက်အတွင်းဖွင့်ပေးလေ့ရှိသည် တုံးထုခ တပြားတချပ်မှပေးစရာမလိုပါ သို့ပေမယ့်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြန်လည်ဝန်ရောက်လာရမည် ဥပမာ – ဧပြီ ၅- ၃၀ ရက်နေ့အထိ ဆိုလျင် ၃၀ ရက်နေ့ကျော်သွားမှထိုင်း နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာလျှင် ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမည်။
Re-Entry ကတော့ အချိန်မရွေး မွေးရပ်မြေသို့ပြန်မည်ဆိုလျင် ထုရသောတုံးဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရမည့်နေ့ မသတ်မှတ်ထားပါ ဗီဇာသက်တမ်းမကုန်ဆုံးသ၍ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာခွင့်ရှိသည် ဥပမာ – ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီ ၅ ရက်နေ့မွေးရပ်မြေပြန်သောကြောင့် Re-Entry တုံးထုသွားသည် မိမိ၏ ဗီဇာက ၂၀၂၀ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှ ကုန်မည်ဆိုလျင် ၂၀၂၀ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မရောက်မခြင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
အတာသင်္ကြန်အတွင်း မွေးရပ်မြေသို့ပြန်လည် အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ဆင်နွဲမည့်သူများအနေဖြင့် ဘယ် လောက်ကြာကြာ မွေးရပ်မြေတွင်နေမလဲဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားပါ ဧပြီ ၅-၃၀ ရက်နေ့ မကျော်ပဲ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည်ဆိုလျင် “ခေတ္တအိမ်ပြန်ခွင့်ဖရီးတုံး” ထုပါ ပိုက်ဆံပေးစရာ မလိုပါဘူး
အတာသင်္ကြန်အတွင်းမွေးရပ်မြေသို့ပြန်ပြီး မွေးရပ်မြေတွင်ကြာကြာနေမည်ဆိုလျင် “Re-Entry အိမ်ပြန်ခွင့်တုံးကြီး” ထုသွားပါ ပိုက်ဆံကုန်ပါသည်
ဧပြီ ၅-၃၀ အတွင်း “ခေတ္တအိမ်ပြန်ခွင့်ဖရီးတုံး” ထုသွားလျင် “Re-Entry အိမ်ပြန်ခွင့်တုံးကြီး”ထုသွားစရာ မလိုပါ
“Re-Entry အိမ်ပြန်ခွင့်တုံးကြီး” ထုသွားသူများအနေဖြင့်လည်း “ခေတ္တအိမ်ပြန်ခွင့်ဖရီးတုံး” ထုသွားစရာမလိုပါအားလုံးအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်အား ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွဲနိုင်ပါစေ Win Htet Aung ၂၁.၂.၂၀၁၉
ကိုးကား :: Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
TaggedLabor newslabourMyanmarMyanmar live newsMyanmar newsNews
Previous Article သတိပေးပြီ!!! ထိုင်းနိုင်ငံမြို့နယ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် မိုးကြီးမည်
Next Article ယူကန်ဒါ နိုင်ငံတကာကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု သက်ထားသူဇာ ရွှေတံဆိပ်ရ